Home Wararka Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab oo duqeyn lagu dilay
Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab oo duqeyn lagu dilay
Dowlada Itoobiya ayaa sheegtay in duqeyn dhanka cirka ah ay ku dileyn ku dhawaad 70 dagaalyahan oo ka tirsan Al-shabaab,Sida lagu shaaciyay Warbaahinta dalkaasi.
Hawlgalkaaan ayaa waxaa fuliyay ciidmada Itoobiya ee qeybta ka ah AMISOM kuwaasi o ku sugan qeybo ka mid ah Koonfurta iyoBartamaha Soomaaliya.
Taliyaha ciidamada Cirka Itoobiya General Yilma Merdassa ayaa sheegay in duqeyntaan sidii loogu talagalay ufushay,sidookale waxuu itaas raaciyay in hawlgalada ka dhanka ah Al-shabaab ay sii xoojin doonaan.
Ciidanka Itoobiya ayaa qeyb ka ah ciidamada AMISOM ee ku sugan gudaha Soomaaliya waxaymna inta badan dagaalo la galaan dagaalyahanada Al-shabaab oo dagaal kala soo horjeeda Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Previous articleMadaxweyne Xaaf oo beeniyay in Xilka laga qaaday
Next articleMooshiin ka dhanac ah Madaxweyne Ku xigeynka Galmudug oo manta laga doodayo
Kooxda Qiyaano Qaran oo Day dayeeyso Qorshe Kale oo ay ku...
Wabigga Shabeelle oo Fatahaad Sameeyay